Beenta Xun ee Warbaahinta Bulshada Gurus Weave | Martech Zone
Jimce, Maarso 27, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani waa qaylo. Beenta, beenta, beenta. Aad ayaan uga daalay maqalka dhamaan waxyaabaha xun ee warbaahinta bulshada 'gurus' u sheega macaamiisha. Xalay waxaan sameeyay a Twitter Sharaxay tababaro ay siinayeen Linda Fitzgerald iyo kooxdeeda, Isku xidhka Haweenka Caalamiga ah. Kooxda waxay ka kooban yihiin haween khibrad leh, awoodna u leh ganacsiga. Erayadooda:
Himiladayadu waa "in aan awood siino haweenka adduunka". Hadafku waa kobcinta, dhiirigelinta, iyo qalabaynta haweenka hab u horseedaya awoodsiin.
Qeybtii hore ee kulanka, waxaan ku qasbanaaday in aan baabi'iyo qaar ka mid ah beenta kooxda loo sheegay. Tani maahan markii ugu horeysay. Waxay iiga baahan tahay inaan qof walba dib u qaado tallaabo oo runtii aan dejiyo. Warbaahinta bulshada ayaa cabsi gelin karta, laakiin uma baahna inay noqoto.
Baraha bulshada ma la yimaadaan buugaagta wax lagu barto.
Sababta ayaa ah in qof walba uu cabiro waxtarka, ujeedka, waxyaabaha uu neceb yahay iyo waxyaabaha uu neceb yahay si kala duwan. Warbaahinta bulshada ayaa awood siisa isticmaaleha… waad aqrin kartaa ama ma aqrin kartaa, raaci kartaa ama kala socon kartaa, iska qor kartaa ama ka bixi kartaa, ka mid noqon kartaa ama ka bixi kartaa… adiga ayey kugu xiran tahay. Maaha in nin uun ka hadlo naftiisa sida warshad ahaan khabiir laakiin waligiis kuma uusan fulinin istiraatiijiyad calaamadeyn iyo suuq geyn muddo dheer noloshiisa ah.
Ha ii sheegin ma ahan inaan u isticmaalo farriimaha tooska ah ee tooska ah ee Twitter. Waxaan kudaray in kabadan 500 oo macmiil barta RSS ee RSS. Waxaan ku haystaa in ka badan 30,000 taageerayaal barta Twitter-ka. Dadku ma raacayaan sababta oo ah baabuurta DM. Dhib malahan hadaadan jeclayn. Uma baahnid inaad i raacdid. Ama si fudud uga bax iyaga!
Ha ii sheegin aniga kuma iibin karo balooggeyga. Waan awoodaa oo waan ku iibin karaa barteyda. Dabcan waan badelayaa ereygeyga waxaanan helayaa natiijooyinka ugu fiican markaan jilco oo aan cadeeyo awoodeyda iyo khibradeyda marka hore. Waan ogahay waxa aan sameynayo. Shirkaddayda, balooggeygu wuxuu leeyahay isbeddelada ugu badan ee shaqaale kasta.
Ha ii sheegin waa inaan ku baahiyaa fiidiyoow Youtube. Waxaan sameeyaa fiidiyowyo si aan u bixiyo xoogaa aragti shakhsi ah oo ku saabsan shakhsiyadeyda iyo si dadku ay iigu ogaadaan muuqaal ahaan, ma ahan oo keliya qoraalka. Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay, laakiin maahan furaha guushayda. Waxaan ka doorbidi lahaa macmiil aan ku qanacsaneyn fiidiyowga inuu iska ilaaliyo halkii uu ka qaban lahaa shaqo liita.
Ha ii sheegin inaan xayeysiin… meel walba. Waxaan haystaa baloog guuleysta oo ay la socdaan kumanaan booqdayaal ah maalin kasta, kumanaan macaamiil ah, kumanaan taageerayaal ah, waxaanan helayaa kaqeybgalid hadal (mid ka mid ah Shirka Caalamiga ah ee ka dhacaya Las Vegas… wax badan oo ku saabsan taas dhowaan), la-tashiga riwaayadaha, fursadaha barnaamijyada, iyo Waxaan ku jiraa guddiga 2 bilow. Khadadka yar-yar ee ku jira qoraalladaydu uma muuqdaan inay dib ii dhigayaan. Kama cudurdaaranayo sameynta dhawr boqol oo doolar bishii boqolkii + saacadood ee aan dhigto celceliska usbuuca.
Ha ii sheegin waxaan u baahanahay kaqeybqaado wada hadalka on Facebook. Waxba igama gelin haddii aad ganacsi ka hesho Facebook. Waan isku dayay. Ma aanan sameyn Markaa haddii aan otomaatig ka qoro balooggeyga iyo Twitter-ka halkaasna aan soo galo bishiiba mar, taasi waa igu filan tahay aniga. Facebook waa AOL nooca 20… ama MySpace 3.0… hubaal inay heystaan ​​lambarrada iyo koritaanka… laakiin waxaa jiri doona wax ka wanaagsan oo soo socda. Taasi waa sababta aan u jeclahay shabakadda. Kama ciyaari doono khamaar dhan taraafikada, shabakadda iyo xiriirada shabakadda bulshada that Waxaan taas ku hayaa barteyda oo aan leeyahay / ordo / toos / keyd / ilaaliyo aad baan u mahadsan ahay.
Ha ii sheegin ma soo diri karo emayl leh hal sawir oo weyn oo aan qoraal ku jirin ololahayga suuqgeynta emaylka Waan sameeyay oo waxaan helay heerka jawaabta ugu sarreysa ee mid ka mid ah ololeyaashayada. Ka gudub.
Ha ii sheegin inaan cuss. Waxaan iska ilaaliyaa inkaarka internetka sida ugu macquulsan maxaa yeelay waxaan dareemayaa inay tahay ixtiraam la'aan dhagaystayaashayda. Laakiin waxaad rabtaa inaad cuss, habaartid! Ma aha inaan akhriyo (in kasta oo aan aqriyay waxoogaa bogag guuleysta oo sameeya). Waxaan si fudud u doortaa inaanan.
Hadaad rabto inaad maamusho taada Samee Lacag Dhaqso ah qorshooyinka on Twitter. Tag! Hadaad ka faa iideysato waa kuu fiicantahay. (Kuu raaci maayo ama ku siin maayo wax tixgelin ah.) Haddii aad rabto inaad kahesho isku-xirnaantaada xigta ee Facebook, u raadi. Hadaad rabto inaad isticmaasho Twitter-ka oo ah Mashiinka Raadinta, u tag! Waxaan u isticmaalaa sida calaamadeeyaha wararka… Waxaan jeclahay si aan kala sooc lahayn u riixista xiriiriye, ku biirista wadahadalka, ka caawinta qof banaanka, ama kaliya isku dayga inaan wado taraafikada u galiyo barteyda. Iga tag! Waan u isticmaali karaa si kastoo aan rabo!
Markaad ka soo qayb gasho bandhig, akhriso baloog, fiirso webinar iyo qaar Guru wuxuu bilaabayaa kahadalka twetiquette, iyo waxa ay tahay inaad sameyso ama aadan sameynin… saamigaaga kuwa raacsan ee dadka aad raacdo, iwm, u ordo albaabka… ha socon. Kuwaas gurus wax fikrad ah kama heysato waxa meheraddaadu tahay, maxay tahay meheraddaadu, waxa ay tahay tartankaagu, qaabkaaga wax loo iibiyo, sida aad u taagan tahay wax soo saarkaaga ama shakhsiyaddaadu tahay. Sidee u awoodaan suurtagal ahaan ma kuu sheegayaa sida loo adeegsado baraha bulshada?!
Waxaan la wadaagaa dhagaystayaashayda xeelado aan isku dayay, sida loo qiyaaso natiijooyinka iyo maxaa shaqeeyay / wixii aan qabsoomin. Waxaan sharxayaa shaqeynta iyo astaamaha qalabka ay wataan. Waxaan ku dhiirrigelinayaa macaamiishayda iyo dhagaystayaashayda inay tijaabiyaan. Waxaan ku dhiirigelinayaa in la cabbiro. Waxaan ku dhiirrigelinayaa inay la yimaadaan dadaal ku filan oo lagaa hubiyo inay tahay mid dhexdhexaad kuu ah iyo in kale. Waxa aniga ii shaqeeya ayaa laga yaabaa inaanay kuu shaqeysan… iyo taa lidkeed.
Warbaahinta bulshada ma laha buug xeer ah.
samee aad xukuma sidaad u socoto… hubi inaad cabirto intaad socoto. Waqti badan ayaad ku qaadan kartaa cayrsashada walxaha dhalaalaya oo aan dib ugu laabanayn maalgashiga.
Tags: gurus warbaahinta bulshadabaraha bulshada waa beenMedia Social Suuq
Mar 27, 2009 at 2: 52 PM
Waxaan jecelahay farriinta weyn ee qoraalkaagu taabanayo halkan, taas oo ah inaysan jirin xeerar. Ama, haddii ay jiraan "qawaaniin" mararka qaarkood jabinta iyaga ayaa ka guuleysan kara raacitaankooda.
Waxaan ku bogaadinayaa farriinta ah in waddooyin cusub la abuuro, oo aan noqon kuwa ka ganacsada idaha.
Mar 27, 2009 at 4: 24 PM
S: Maxay ku kala duwan yihiin xeerka iyo fikirka wanaagsan?
J: Xeer waa uun wax dadku samaysteen. Fikradda wanaagsan waxay faa'iido u tahay dad badan, laga yaabee xitaa qof walba.
Doug gabi ahaanba waa sax: ma jiraan wax sharciyo ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada. Adduunyada xeerarku waa qadka kama jiraan, laakiin ma jiraan wax jiifayaal ah, booliis ama garsoorayaal kormeera aaladda internetka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira fikrado wanaagsan iyo fikrado aad u xun. Tusaale fikrad xun xun ayaa ah cay. Ma maqashay wax yaabaha foosha xun ee uu Doug Karr sameeyay usbuucii hore? Wanaagsan, maxaa yeelay waxaan sameeyay uun. Ku hadalka been abuurka ama sumcadda sumcadda qadka tooska ah waxay yeelan kartaa raad taban oo khad la'aan ah. Dheug ka noqoshada faallooyinkaan, Doug waxaa laga yaabaa inuu u diro Vinny inuu jebiyo jilibkeyga ama uu iiga adeego dacwad.
Talooyinka Doug miyey ka sareeyaan dhammaantood si aad u xun fikradaha xun? Uma maleynayo sidaas, laakiin kuma qanacsani inay dhammaantood yihiin talooyin weyn, sidoo kale. Dabcan, waad soo diri kartaa emayl kaas oo ka kooban sawir keliya isla markaana aad u qancin karto inta badan macaamiishaada. Haddii aad sidaas sameysid waxay sidoo kale fogeyn doontaa dadka aragga naafada ka ah. Sababtaas darteed, shaqsiyan waxaan isku dayaa inaan raaco Sharciga Veen oo aan iska ilaaliyo waligey erey hagalin (Laakiin xitaa uma maleynayo Flickr waa inuu noqdaa mid sharci darro ah. Taasi waa tan sare.)
Sidoo kale, Auto-DM waxay kaliya fogeyn doonaan boqolkiiba in yar oo raacsan haddii aad hore u haystaan 1,000s kuwa raacsan. Kula talin maayo hadaad kucusubtahay twitterka sidaan saadaaliyo waxay carqaladeyneyso koritaankaaga.
Ma jiraan wax xeerar ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada. Laakiin waxaa jira fikrado wanaagsan, qaarna waan raadinayaa. Ma ogtahay midna?
Mar 27, 2009 at 4: 56 PM
Tani waa caqli badan oo run ah. Waxaan rajeynayaa in dadka dhageysanaya / aqrinaya ay fiiro gaar ah u yeelan doonaan. Ma jiraan sharciyo marka ay timaado baraha bulshada iyo isku xirka bulshada. Waxa ka shaqeeya qaybtayda waxbarashada ayaan u shaqeyn karin qof kale adduunka tikniyoolajiyadda. Waxyaabo waaweyn.
Calaamadee "Rizzn" Hopkins
Mar 27, 2009 at 7: 51 PM
Waan ku raacsanahay qoraalkaaga guud ahaan. Xeerarka si joogto ah ayaa dib loogu qoraa. Dhaqan ahaan, ma jiraan sharciyo.
Ma jirto hal waddo oo kaliya oo suuq loogu adeegsado internetka.
Waxaa jira * hababka ugu fiican * ee waxyaabaha qaarkood looga sameeyo internetka. Waxaa jira dariiqooyin sax ah iyo qaabab qaldan oo loo qaybiyo taxane fiidiyoow ah oo xayeysiis lagu taageerayo (haddii aad rabto inaad guuleysato, taasi waa), tusaale ahaan. Waxaa jira dariiq sax ah oo lacag looga dhigto baloog haddii ay ugu horreyn tahay barxad saxaafadeed (kuwa xayeysiinta laba-geesoodka ah waxay abuuri karaan muuqaal aan habboonayn).
Waxaa jira * khibrad dhanka baraha bulshada ah, maxaa yeelay qaarkeen ayaa tan sameenayay in kabadan toban sano, waxayna ka shaqeeyeen dhaqamada ugu fiican howlaha guud iyo ujeedooyinka.
Dhinaca kale, aad ayaan marar badan waqtigayga ugu lumiyaa markaan raaco talo xun oo wanaagsan maxaa yeelay qaar "khabiir ah" ayaa dejiyay sharciga ka dib markay akhriyeen seddex bilood oo Mashable iyo Techcrunch ah waxayna go'aansadeen inay u baahan yihiin inay xirfad ku yeeshaan meheradda .
Mar 27, 2009 at 9: 38 PM
Mahadsanid Mark! Faalladaadu waa hubaal ruuxii aan qoraalkan ku qoray. Waxaan si fudud rabaa dadka inay ogaadaan in tikniyoolajiyadani aysan aheyn inay cabsi geliso, waa inay awood yeelataa!
Mar 27, 2009 at 11: 25 PM
"Adduunyada sharciyada waa qadka, laakiin ma jiraan wax garyaqaano ah, booliis ama garsoorayaal ilaaliya aagagga internetka." Hagaag, runtii waxaa jira qareenno, booliis iyo garsoorayaal (kan dambena waa ka xukun badan yahay kuwa maxkamadda!), Iyo cayda iyo DMCA ayaa ah waxyar (laakiin ugu caansan) ribada meelaha internetka.
Anigu kuma raacsani ereyga "hababka ugu fiican" ee loo isticmaalo qaab fudud ama qaab uun ka duwan erayga "xeerar", maadaama taasi ay tahay uun qaab cusub oo macno leh oo loo yiraahdo "xeerar". Dhaqannada ugu wanaagsan ayaa si aad ah loogu dabaqaa koodh garaynta bogga, laakiin aan ku jirin (marka laga reebo qaabka & naxwaha & higgaadinta, iyo haddii ay sidaas tahay Hab-dhaqanka ugu Fiican FTW, laakiin naxwaha qaabka, iyo higgaadintu MA ka dhigayaan content - waxay ka dhigayaan uun macno ahaan oo la fahmi karo, taas oo waa inuu ahaadaa mid muhiim ah).
Sidaad aragtay - Waxaan dejiyay qawaaniin halkan - laakiin ma ahan qawaaniin ku saabsan sida looga qayb qaato naqshadeynta warbaahinta bulshada ama habka loo wajahayo, sidaa darteed ma sameyn doono.
Mar 28, 2009 at 5: 07 AM
Si fiican u qoran, geesinimo leh, dhambaal blog ah oo daacad ah.
Hadday dadku ku raacsan yihiin iyo in kale fikradda boostada iyagaa iska leh laakiin…
Tani waa qoraal muhiim u ah bulshada oo dhan. Hubso inaad adeecdo sharciyada muhiimka ah:
Isku xir & isdhexgal
ka sarreeya dhammaan: ogow macmiilkaaga ama bartilmaameedkaaga.
Farriin weyn. Sii wad.
Dooda DM waa mid wanaagsan oo boostada ayaa u adeegsan laheyd sabab dheeri ah bartaada maxaa yeelay waad kacsantahay laakiin ppl waxaad ubaahantahay sababta DM nazis ay u yihiin nutz
Mar 28, 2009 at 9: 52 AM
Sida saxda ah. Dadka qaarkiis waxay jecelyihiin inay isu dhigaan inay yihiin "hogaamiyayaal fikir" iyagoo daabacaya liisaska waxyaalaha la sameeyo iyo wixii aan la samayn. Runtu waxay tahay waxaan ku jirnaa marxaladda Wild West ee warbaahinta bulshada wax walbana way socdaan.
Mar 28, 2009 at 1: 00 PM
Mar 28, 2009 at 10: 17 AM
On auto-DM ee:
Waan ka xunnahay, muuqaalka otomaatiga-DM-ga ah waa spam, mid fudud oo fudud. Maxaad u dooneysaa inaad iswada gaarsiisid isgaarsiinta marka hore? Waxay muujineysaa ixtiraam la'aan dadka adiga ku raacaya, imo. Waad saxan tahay - xeerar ma jiraan, si kastaba ha noqotee waxaan u maleynayay in aan si wada jir ah suuq ahaan uga soo gudubnay isku dayga ah inaan kuwa kale been abuurno?
Marka laga hadlayo:
Si taxaddar leh ugu dhiirrigelinta dadka cuss - xusuusnow, qof kastaa kuma jiro booska aad ku sugan tahay. Dadka heerka hoose waxay waayi karaan shaqadooda ama waxaa suuragal ah in mustaqbalkooda la carqaladeeyo markii loo shaqeeyayaashu arkaan inay horay uga qunsanayeen dadweynaha. Isticmaalka taatikadu waxay aad ugu socotaa halkaas.
Mar 28, 2009 at 1: 04 PM
RE: Spam - Sida kaliya ee aad kuheli karto Auto-DM waa hadii aad qof raacdo… taasi waa iska-gal. Haddii aad qaddarinayso farriinta iyo in kale macnaheedu maahan inaadan qofka siinin fasax uu kuugu soo diro.
Runtii waan ku qanacsanahay Auto DMs umana arko inay yihiin SPAM. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax badan ka ogaado qofka aan raacayo oo aan helayo jawaab deg-deg ah sidan oo kale ayaa weyn. Maaha wax adag in la tirtiro.
Re: Cussing - Ma aanan ku dhiirigalin dadka cuss. Xaqiiqdii, waxaan ku dhiirrigelin lahaa dadka inaysan dhicin. Waxaan kaliya sheegayaa in ay u shaqeyso dadka qaarkiis umana muuqato inay dhaawaceyso raacitaanadooda. Kaliya waa 'sharci' aan u shaqeyneynin qof walba (laakiin aniga wuu ila shaqeeyaa).
Mar 28, 2009 at 10: 58 AM
Nacas mar, ceeb baan kaa qabaa. Doqon laba jeer, ceeb igu qabo Inaad kaqeyb qaadan wada hadalka waxay ka dhigan tahay inaad ka tagtay wadahadalka. Haddii aan ku imaado balooggaaga, midka aad adigu leedahay / orod / toos / gurmad / iyo kormeer, ka dib waxaan filayaa wadahadalkeennu inuu halkaa ku sii socdo.
Haddii aad dejiso ajandaha ka dibna aad la baxdo, anigu soo noqon maayo. Waxa aan sameyn doono, haddii aan ixtiraamo shaqadaada, waa in aan u qaado waxyaabaha aad ka kooban tahay meel kale oo aan kala hadlo dadka kale ee ku hawlan fikradda falanqaynta kalsoonida. Waxa aad soo bandhigtay waxay noqon karaan fikrad wax ku ool ah laakiin waxaad nooga tagtay, haddii aadan ka sii qeybqaadan khadadka, waa uun marin habaabin ah.
Mar 28, 2009 at 1: 06 PM
Marwalba waan kaqeyb qaadanayaa wadahadalka. Haddii uu qof iigu soo jawaabo Plaxo, LinkedIn, ama Facebook - Had iyo jeer waan soo celiyaa farriinta. Ujeeddadaydu waa inaanan helin 'bang for the buck' oo aan waqti badan ku qaato aagaggaas, sidaa darteed waxaan fariinta ugu keenayaa kuwa raacsan halkaas. Hadday jawaabaan, aniguna waan ka jawaabayaa. Kaliya uma qiimeeyo inay yihiin habka aasaasiga ah ee isku xidhka MY.
Waad ku mahadsan tahay ku darista wadahadalka!
Mar 28, 2009 at 12: 49 PM
Sheesh, Doug. Waxaan u maleynayaa inuu qof ku haystay surwaaladaada qalajiyaha muddo aad u dheer. Dhab ahaan, waxaan u maleynayaa inaan kugu raacsanahay (hal mar uun aqri). Ka taxaddar dhammaan "khubarada". Raadi caawiyayaal.
Mar 28, 2009 at 1: 37 PM
Post Fantastic Doug! Dadku waxay i weydiiyaan maalin kasta, 'Maxay yihiin adeegyada aan u adeegsado inaan ku kobciyo ganacsigeyga? Sideen u isticmaalaa iyaga? Ma aqaan !!! Waa inaad fiirisaa waxyaabo badan oo ku saabsan ganacsigaaga marka hore. Gabi ahaanba majiraan xal hal-joog ah oo loogu talagalay istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada.
Waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad sameysid qorshe adoo adeegsanaya mala awaal wanaagsan oo kusalaysan macluumaadkaaga iyo khibradaada jira, fulinta qorshaha, cabir natiijooyinka, iskana tuur wixii aan shaqeyneyn (intaad kordhinaysid waxa shaqeeya, dabcan).
Mar 28, 2009 at 7: 16 PM
Murugo wacan mahadsanid qoraalkaan. Waan ogolahay 100%. Haddii aad rabto inaad ka fogaato ama ku jees jeeso ama kubbadda madoow ama wax kastoo ay tahay maxaa yeelay anigu “saf kuma lihi” - ku qabo. Ma aha inaan raaco sharci kasta oo sifiican ayaan ugu qanacsanahay ganacsiga aan ku helo sidaan rabo. Waan xanaaqsanahay inkasta, gaar ahaan websaydhyada qaarkood / noocyada aniga (si kastaba ha noqotee) u dhaqma sida lemarka oo tallaabo kasta oo ay ku tiirsan tahay waxa madaxa hadalka qaar sheegayo.
Guntii iyo gunaanadkii, samee xulashooyin aqoon leh, laakiin… ka fikir naftaada.
Mar 28, 2009 at 7: 28 PM
re: twitter auto follow - Anigu ma isticmaalo oo waxaan qiyaas ahaan ahay 2500 qof. Waqtigu wuu sii socdaa xawaaraha aan ku helayo kuwa raacsan ayaa umuuqda inay sii kordhayaan waxaana sii adkaanaya in wax laga qabto mid kasta oo la socota wax kasta oo u eg shaqsi ahaaneed “mahadsanid” Waxaan arki karaa adeegsiga gawaarida soo socota. Ma ahan inuu noqdo shaqsiyan laakiin waxay noqon kartaa jimicsi waqti badan qaata. Waxaan marwalba isku mari doonnaa barta Twitter-ka ugu dambeyn. Haddii aan isticmaali lahaa la socoshada otomaatiga, waxay u badan tahay inay tahay uun inaan idhaahdo mahadsanid oo aanan "wax ka iibin" wax uun… kaliya mahadsanid fudud. Shakhsiyan "iska hubi balooggeyga" auto DMs ayaa iga careysiiya. Mahadcelin fudud maahan.
Mar 28, 2009 at 8: 40 PM
Doug - Shhhh. Waxaad bisadda ka sii deyneysaa boorsada. Haddii dadku ogaadaan, waxay ogaan doonaan inaan baahi badan loo qabin baraha warbaahinta bulshada oo leh aqoon ka yar aaggooda khibrad marka loo eego ka dugsiga sare. Waxay sidoo kale ogaan karaan in khubaradan badankood ay waxtar u leeyihiin sida qashin-qubka "Dharka Cusub ee Imbaraadoorka."
Oh, iyo ninka leh "xeerarka ayaa beddelaya" tani maahan SEO halka ay dhab ahaantii ka jiraan xeerar uumi ah oo jira. In warbaahinta bulshada, ma jiraan xeerar.
Mar 28, 2009 at 10: 24 PM
Dhisida qorshaha ciyaarta iyo qaadashada qaab istiraatiijiyadeed oo leh la-taliye 'wanaagsan' ayaa ka caawin kara shirkadda inay si buuxda uga faa'iideysato warbaahin kasta, si sax ah u cabirto natiijada, oo ay u badbaadiso waqti badan oo ay ku sameyso. Uma doodayo kaligey in aan tago, waxaan ka soo horjeedaa khubaradaas iibisa qaacido caan ah… dhamaanteen waan ognahay inaysan jirin midna!
Mar 28, 2009 at 8: 42 PM
Warbaahin kasta oo cusub oo bulsheed bilowgeeda waxay bixisaa ka baxsiga xuduudaha iyo kontaroolada rasmiga ah. Waxay yeelan kartaa rafcaan ballaaran waxayna u oggolaaneysaa xorriyadaha inay ikhtiraacaan isticmaaleyaal badan, baahiyo, shaqsiyaad.
Lama huraan, qaar ka mid ah adeegsadayaashu waxay raadsan doonaan inay 'lahaadaan' warbaahinta cusub, si ay u muujiyaan hanashada iyo khibradda ay u leeyihiin is-weyneysiin ama faa'iido. Tani waxay u muuqataa inay tahay koorso dabiici ah dadaal kasta oo aadanaha.
Shakhsiyan, waan jeclahay wajiga hore ee fowdada markii wax waliba macquul u muuqdaan: Waxay la mid tahay shiraac maran. Si lama huraan ah, si kastaba ha noqotee, bina aadamku wuxuu dib ugu noqdaa dejinta qaab dhismeedka iyo kontaroolada.
Mar 29, 2009 at 9: 03 AM
Waxaan helay xorriyad markaan aqriyay waxaad qortay. Aad baan u xishood badnaa markii hore si aan u baadho oo aan waxyaabo cusub ugu tijaabiyo Twitter-ka. Waan fiirsanayay. wax ka barashada dadka kale oo kaliya jecel hadiyadda Twitter ee ah karti u lahaanshaha wadaagida iyo wax ka barashada dadka kale.
Markaa hal mar ayaan aqriyay ma dhajin karo wax shaqsi ah oo noloshayda ka socda .Shaqsi ahaan waxaan u helay tweeting oo ah mid ka mid ah aaladaha ugu wax ku oolka badan ee aan kalkaaliyayaasha caafimaad ka fulino wax ka qabadkeena waana awoodaa in hawada laga saaro oo la muujiyo waxkasta oo aad ku sugan tahay. gudahaaga. Waxay si fudud uga caawisaa yareynta iyo yareynta xanuunka iyo cadaadiska nolosha.
Way fiicantahay in la ogaado inaan noqon karo waxa aan ahay. Waxaan ku cabiri karaa aragtideyda iyo qaabkeygaba sida ay tahay. Waad ku mahadsantahay xoriyadaas, jeclaaw! Haa!
Mar 29, 2009 at 12: 24 PM
Cusbooneysiinta akhrinta macluumaadka qof shaqada qabanaya. Sideen ku ogaadaa? Sababtoo ah waxaan khibrad u leeyahay sameynta waana ogahay inuu saxan yahay.
Qodobka Muhiimka ah: U adeegso warbaahinta bulshada sida aad rabto. Hadaad rabto inaad dhisato ganacsi adoo adeegsanaya ilaha warbaahinta bulshada. U tag oo isticmaal waxa shaqeynaya. Tusaale ahaan, Facebook wuu ii shaqeeyay. Waan sii wadaayaa isticmaalkeeda waana qeyb kamid ah istiraatiijiyadeena suuq geynta warbaahinta bulshada ee aan ugu hirgalino macaamiisha.
Waad ku mahadsantahay mowqifkan sida wanaagsan loo qeexay.
John Jantsch - Suuqgeynta Duubista Duub
Mar 29, 2009 at 4: 24 PM
Dabcan, halista ku jirta douggan Doug ayaa ah inaad si qatar ah ugu dhowaato inaad siiso qiyaasta oo aadan naftaada s iska dhigin, kaliya qiyaaso kala duwan oo aadan u maleynin raggaas kale.
Waxaan u maleynayaa in farriinta dhabta ah, maskaxdaydana aad ka leedahay qodobkan, ay tahay iyadoo aan loo eegin aaladda ay tahay, isticmaalka waa in had iyo jeer lagu tilmaamo suuqaaga iyo ujeeddooyinkaaga. Su'aal kama taagna sida ay dadka qaar kuugu sheegaan inaad u isticmaalayso warbaahinta bulshada inay ka muuqato dhinaca waxtarka dadka qaar. . . iyo, siyaabaha aad u soo jeedinaysid waa kuwo iska cad adiga, iyo kuwa kaleba, laakiin dhab ahaan maahan dhammaantood.
Khatarta dhabta ah ayaa ah marka dadku bilaabaan inay qirtaan habab sax ah iyo kuwo qaldan oo wax lagu sameeyo - habka kaliya ee saxda ah, sida aad tilmaantay, waa midka ka shaqeeya xaaladaada gaarka ah.
baraha bulshada waa aalad, diin maahan!
Mar 29, 2009 at 5: 31 PM
Waxaad ka dhigeysaa qodob weyn - waxaanan u maleynayaa inaad sii cadeyn doonto tayda xitaa intaas ka sii badan. Ma doonayo inaan cabsi geliyo, waxaan rabaa inaan awood siiyo. Awood siinta dadka waxay u baahan tahay la taliyaha baraha bulshada inuu noqdo mid aan dhex dhexaad ahayn, laakiin aqoon leh.
Tusaale ahaan, waxaan ahay taageere weyn StumbleUpon, laakiin waxaan garwaaqsanahay inay la jaanqaadayso caadooyinkayga iyo shaqsiyaddayda intay le'eg tahay Ninth. Taas macnaheedu maaha in macaamiishaydu ay iska dhaafaan isticmaalka Digg oo ay ku boodaan StumbleUpon, tho!
Taa baddalkeeda, waxaan sharxayaa sida mid kasta looga faa'iideysan karo, astaamaha u gaarka ah, sida ay u soo qabteen waqtiyadii la soo dhaafay, waxaanan ku dhiirrigelinayaa qofka inuu mid walba tijaabiyo. Waxaan markaa qiyaasi karnaa saameynta dadaalkooda oo aan aragnaa midka ka faa'iideysanaya (ama xitaa haddii labadaba laga yaabo!).
Mar 31, 2009 at 10: 54 PM
Waan kugu raacsanahay wax kasta oo aad qorto Doug, waxaan ku arkay isla xaalada halkan Australia.
Waxaan u maleynayaa in xeerarka khuseeya ay yihiin xeerarka edbinta guud iyo asluubta aasaasiga ah. Waxaa laga yaabaa inay ku jirto shabakadda laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan edeb iyo ixtiraam lahayn
Apr 9, 2009 at 11: 02 PM
Runtii waxaa jira oo keliya laba erey oo maskaxdaada ku soo dhaca
Jul 24, 2011 markay tahay 8:28 PM
Runtii ma jiraan wax xeerar ah oo midkoodna leeyahay; kanaalka, bulshada, toos / buugga, iimaylka, webka… adigu magacow. marka laga reebo xeerar kasta oo FTC ay dhaqan gelisay. Natiijooyinka waxay ku kala duwanaan lahaayeen si ku saleysan dhagaystayaashaada, markaa waxaad gartaa sharciyada aad u baahan tahay inaad raacdo ganacsigaaga.